Tababare Solskjær oo muujiyay sida uu ugu faraxsan yahay guushii ay ka gaareen Man City – Gool FM
(Manchester) 08 Maarso 2021. Tababaraha kooxda Manchester United ee Ole Gunnar Solskjær ayaa muujiyay sida uu ugu faraxsan yahay guushii ay ka gaareen Manchester City kulankii Manchester derby ee ka dhacay garoonka Etihad.
Ciyaarta kaddib Gunnar Solskjær ayaa u muujiyay warbaahinta dareenkiisa kaddib guusha ay kooxdiisa ka gaartay City, wuxuuna yiri:
“Waxaan dareemayaa farxad aad u weyn. Waxaan jeclaan lahaa inaan iraahdo kadib markaan dhaliyay goolka koowaad, waxaan hoggaanka heynay 15 daqiiqo, intaas kaddib, nus-saca ugu dambeeyay qeybtii hore, waxaan dareemay inaan u ciyaareyno natiijada.”
“Marka aad iska difaacdo kooxaha adag, waxaa lama huraan ah inay abuuri doonaan fursado. Waxaan sugayay dhamaadka qeybta hore ee ciyaartoyda.”
Intaas kaddib Ole Gunnar Solskjær ayaa ka hadlay qaab ciyaareedka Anthony Martial, wuxuuna yiri:
“Martial waa xiddiga ciyaarta, wuxuu laga qabay shaki la mid ah midka Luke Shaw si uu uga qeyb galo ciyaarta, kani waa Martial-kii aan naqiinay, ee fiicnaa isla markaana xooganaa, waan ku faraxsanahay isaga.”
“Goolkii labaad waxa uu ahaa mid aad u fiican. Tani waxaay muujineysaa cida uu yahay Luke Shaw. Shaki weyn ayuu saakay qabay inuu ciyaaro wuuna ka gudbay tijaabada taam ahaanshaha inuu ciyaaro, qaab ciyaareed layaab leh ayuu sameeyay.”
“Man City waa koox si weyn hormar uga sameysay qaab ciyaareedkeeda xilli ciyaareedkan, laakiin kuma fikir kartid wax aan ahayn inaad guuleysato oo aad ka fiicnaato sidii sanadkii hore, Kahor ciyaarta, waxaan ku jirnaa kaalinta seddexaad waxaan dooneynay inaan si la hubo horey ugu socono.”
"Man City waxay ahayd mid layaab leh, inkastoo ay guuldarreysatay kulanka Manchester derby.” – Pep Guardiola